Ilhaan Cumar oo ka hadashay "cabsi-gelinta" NISA ee Haaruun Macruf
Sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in uu dacwad ka gudbiyey wariyaha ka tirsan VOA Soomaali.
WASHINGTON, US – Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Mareykanka isla markaana ah gabar asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa si adag uga hadashay cabsi-gelinta hay'adda NISA ay ku hayso Haaruun Macruuf.
Qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay garab istaaga ugu muujisay wariyaha laanta Afka Soomaaliya ee idaacadda VAO-da.
Xildhibaanada ayaa ololaha ka dhanka ah saxafiga baaritaanka sameeya ku tilmaamtay mid si qoto dheer mudan in looga murugoodo.
"Ololaha cabsi-gelinta ee ka dhanka ah Haaruun Macruuf waa mid si qoto dheer looga murugoodo," ayay hadalkeeda ku bilowday.
Intaas waxay raacisay: "Weeraradan, oo uu wehliyo xariggii 14-kii April lagula kacay Cabdicasiis Axmed Gurbiye isagoo ku guda jira shaqadiisa tabinta saameynta Covid-19 ee gudaha Soomaaliya, waa xadgudub aan la aqbali karin oo ka dhan ah xuquuqda aas-aasiga ah ee aadanaha".
Dhanka kale, war-saxaafadeed ay soo saartay ayay ugu baaqdey Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya in joojiso cabsi-gelinta iyo cadaadiska ay ku hayso warbaahinta xorta ah.
Mukhaabaraadka Soomaaliya oo ku eedeeyay Haaruun Macruuf in uu leeyahay "xiriir khatar ku ah amniga qaranka" ayaa sheegay in gal-dacwadeed ka dhan ah saxafiga ay u gudbiyeen xafiiska xeer-ilaalinta Qaranka.
Illaa iyo haatan ma cadda waxyabaaha daaha gedaashiisa ka socda ee ay salka ku hayso doodan qabsatay baraha bulshada Soomaalida.
Hay'adda Nabad-sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxaa madax u ah Fahad Yaasiin Daahir, kaas oo lagu sheegay shaqsiga ugu awooda dowladda Farmaajo isla markaana uu gaaro go'aanada culus ee masiiriga ah.
Ruuxii dilka ugu hanjabay Ilhaan Cumar oo xukun lagu riday
Caalamka 09.03.2020. 06:30
Xukunsanaha ayaa la sheegay in uu taageero weyn u yahay madaxweyne Donald Trump.
Gudoomiyihii rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo "lasii daayey"
Soomaliya 05.02.2020. 18:10
Haweenayda ku colaadisay Ilhaan taageero ay u raadineysay Soomaaliya
Soomaliya 28.01.2020. 13:15
BF oo war kasoo saarey qoraalkii NISA ee qaraxii Ex-kontarool Afgooye
Soomaliya 05.01.2020. 18:00
NISA oo qabatay "xubin sarre" oo ka tirsanaa warbaahinta AlShabaab
Soomaliya 29.08.2019. 15:41